के थियो त प्रियंकालाई आयुष्मानको उपहार? - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
के थियो त प्रियंकालाई आयुष्मानको उपहार?
५ असार २०७४, सोमबार १२:५१ 12
केही समय यता नायिका प्रियंका कार्की र आयुष्मान देशराज जोशी निक्कै चर्चामा रहे । कारण, उनीहरुको माया प्रेम । प्रियंका र आयुष्मानसँग मिडियाले प्रेम सम्बन्ध बारे सोध्दा दुवैले यस विषयमा खुलेर बोलेका थिएनन् । आधिकारिक रुपमा एक अर्काको प्रेममा रहेको कुरा व्यक्त गरेका थिएनन् । तर, शनिवार सम्पन्न भएको एन एफ डि सी अवार्डमा आयुष्मानले प्रियंकालाई आधिकारिक रुपमा आफ्नो प्रेमिका भनेर चिनाए ।
अवार्ड शोमा यी दुईले एक अर्कालाई चुम्बन कार्यक्रमको आर्कषण बन्यो । अवार्डमा प्रियंकाले लगाएको पहिरन उनलाई आयुष्मानले गिफ्ट गरेका हुन् । यो कुरा प्रियंकाले आफ्नो ईन्स्टाग्राममा एक तस्विर सेयर गर्दै बताएकी छिन् ।
उनले फोटोको क्याप्सनमा लेखेकी छिन्–
“यो राम्रो गाउन मेरो प्यारी सिवाङ्गीले तयार पारेकी हुन् । नेक पिस र एयररिङ स्वार्वस्किको हो ।
यो गाउन यात्जी (अर्थात) आयुष्मानको गिफ्ट हो ।
फाटोग्राफर श्रीधर पौडेल”
यति लेखेर उनले आफ्नो इन्स्टाग्राममा सबैलाई ट्याग गरेकी छिन् ।
आयुष्मान देशराज जोशीप्रियंका कार्की
उनलाई गरेको त्यो एकोहोरो प्रेम– प्रेम गीत-२ निर्माता सन्तोष सेन